योनिच्छेद भनेको के हो ? यो फाट्नु वा नफाट्नुले कुमारित्वमा के असर पर्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
योनिच्छेद भनेको के हो ? यो फाट्नु वा नफाट्नुले कुमारित्वमा के असर पर्छ ?
२०७४, १६ पुष आईतवार
साधारणतयाः यौनिच्छेद नफाटेका केटीहरुलाई कुमारी भन्दछन् । यौनिच्छेद नरम र पातलो जालो जस्तो हुन्छ, जुन स्त्रीको योनीको मुखमा टाँसिएर रहेको हुन्छ । यसले योनीको मुखलाई पूर्णतया बन्द गरेको भने हुँदैन ।
समान्यतया जब केटीहरुको पहिलो सेक्स हुन्छ, त्यसबेला योनिच्छेद तन्किन्छ र च्यातिन्छ । जसले गर्दा केही असजिलो हुने र रगत आउने हुन्छ । योनीद्वारको आकार र बनावट महिलाहरुमा फरक फरक हुने भएकोले योनिच्छेद फाट्दा हुने असजिलो तथा रगत बग्ने मात्रा पनि मान्छे अनुसार फरक फरक हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस थाहा पाइराखौं सेक्स गर्ने उपयुक्त समय र स्थान !
तर, याद राख्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा एकपल्ट पनि सेक्स नहुँदै पनि योनिच्छेद फाटिसकेको हुन्छ भने कतिमा योनिच्छेदको तन्किने क्षमता बढी भएकोले प्रथम पटकको सेक्समा पनि च्यातिदैन । र कति पनि रगत नआउन सक्छ ।
यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यविद् एवं नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा.खेम कार्कीका अनुसार अरु विभिन्न कारणहरु जस्तै शल्यक्रियाको परिणाम स्वरुप, चोटपटक, हस्तमैथुन आदि कारणले अथवा एकदमै बढी मात्रामा शारीरिक कामहरु गर्नाले, खेलहरु खेल्नाले केटीहरु कुमारी हुँदाहुदै पनि तिनीहरुको योनिच्छद फाटेको हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस किन मानिसहरु बत्ती बालेर वा नांगै भएर सेक्स गर्न चाहँदैनन् ? यस्तो छ कारण
डा कार्की भन्छन, ‘योनिच्छेद फाटेको आधारमा केटीलाई कुमारी हो वा होईन भन्नु एकदमै गलत हो । ’
पहिले पहिले सानै उमेरमा विवाह गरिदिने चलन व्यापक थियो । त्यसैले कुमारित्वको कुरा बढी उठ्ने गर्दथ्यो समाजमा । यसका साथै शिक्षाको अभावले पनि यी कुरालाई बढी महत्व दिइन्थो । तर अहिले समय परिवर्तन भएको छ । युवतीहरुको विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष मात्र भएको छ । कानूनले समेत २० वर्ष पुरा नभइ विवाह गर्न बन्देज लगाएको छ । पढे–लेखेको समाजमा यी कुरा आफै हराएर गइरहेको छ । तर अहिले पनि ग्रामिण क्षेत्रतिर मात्र नभएर शहरी क्षेत्रमा पनि कुनै न कुनै रुपमा कुमारित्वको कुरा हुने गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस ८२ प्रतिशत महिलाहरु हस्तमैथुन गरी यौन इच्छा पूरा गर्छन्
कुमारित्वको कुरा महिला हिंसाको एक पाटो भएको महिला अधिकारकर्मि बताउछन् । तर यौनिच्छेदकै आधारमा कुमारी नभएको भन्दै कुनै पनि युवतीलाई आरोप लगाउन भने नमिल्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
ट्याग्स: sex and reproduction
नेपालगञ्ज विमानस्थललाई ‘हब एयरपोर्ट’ बनाउँछौँ : मन्त्री भट्टराई